अन्तराष्ट्रिय आमन्त्रण खुल्ला ब्याडमिन्टनमा एपीएफको बर्जश्व | KhelNepal
अन्तराष्ट्रिय आमन्त्रण खुल्ला ब्याडमिन्टनमा एपीएफको बर्जश्व
काठमाडौ- अन्तराष्ट्रिय आमन्त्रण खुल्ला ब्याडमिन्टन प्रतियोगिताको मिक्स युगल तर्फ एपीएफका जोडी हाबी भएका छन् । आज सम्पन्न क्वाटरफाईलनमा एपिएफका तीन टिमले सेमिफाईनल यात्रा तय गरे ।
एपिएफका पुजा श्रेष्ठ र दिपेश धामीको जोडीले बिबिएका सिमा राजबंशी र सुजन श्रेष्ठको जोडीलाई २१ । १६, २१ । १२ ले पराजित गर्दै अन्तिम चारमा स्थान बनाए ।
यस्तै एपिएफकै सुनैना मुखिया र गौतम कठायतको जोडीले सेनाका अमिता गिरी र नविन श्रेष्ठको जोडीलाई २१ । १२, २१ । १८ ले पाखा लगाउँदै सेमिफाईनलमा श्रेष्ठको जोडीसंगको भेट पक्का गरे ।
अर्को खेलमा सेनाका अनुमाया राई र नम्बर एक खेलाडी सेनाका रत्नजित तामाङ्गको जोडीले बिबिएका निता लम्साल र प्रनिश सिंह ठकुरीको जोडीलाई २१ । १०, २१ । १३ ले पराजित गर्दै सेमिफाईनलमा एपिएफका शोभा गौचन र बिजित थापा मगर संगको भेट पक्का गरे । शोभा र बिजितको जोडीले बिबिएका सूर्य श्रेष्ठ र धनमाया लिम्बुको जोडीलाई २१ । १४, २१ । १३ ले हराए ।
दूर्गादेवी दुलाल सुन्दरहरैंचा स्पोर्टस् ग्रामद्वारा आयोजित प्रतियोगितामा अन्तराष्ट्रिय बिजेता प्रिन्स दाहालले आफ्नो बिजयी यात्रालाई कायम राख्दै क्वाटरफाईनलमा एपिएफका गौतम कठायतलाई २३ । २१, २१ । १३ ले पराजित गर्दै सेनाका रुकेश महर्जन संगको भेट पक्का गरे । रुकेशले पुलिसका बिष्णु कटुवाललाई २१ । १४, ११ । २१, २१ । १६ ले पाखा लगाए ।
यसैगरि सेनाका प्रफुल महर्जनले एपिएफका बिजित थापा मगरलाई २१ । १५, १५ । २१ र २२ । २० को कठिन जित निकाले । अव प्रफुलले एपिएफका सुनिल जोशी संगको भेट पक्का गरेका छन् । सुनिलले पुलिसका जीवन आचार्यलाई २१ । १४, १७ । २१, २१ । १४ ले पन्छाउन सफल भए ।
भेट्रान्स युगल तर्फको खेलमा बिराटनगरका जीवन बोगटी र खोटाङ्गका दीपक राईको जोडीले धनकुटाका दीपक लामा र कुमार दाहालको जोडीलाई २२ । २०, २१ । १७ले, पोखराका रमेश भट्टचन र धादिङ्गका बिष्णुलाल श्रेष्ठको जोडीले लक्ष्मी मार्गका सन्तोष राई र पदम धिमालको जोडीलाई १७ । २१, २१ । ८, २१ । १३, र धनकुटाका किरण प्रधान र योगेश्वर श्रेष्ठको जोडीले ईटहरीका सुरेश कार्की र श्याम लामाको जोडीलाई २१ । १७, २१ । १५ ले पराजित गर्दै सेमिफाईनलमा स्थान बनाए ।
अर्को एक जोडी बिराट ब्याडमिन्टन क्लबका संजय भक्तराज र के.बि. गुरुङ्ग पनि सेमिमा स्थान बनाउन सफल भए । के.बि. गुरुङ्ग एक हात नभएका अपाङ्ग खेलाडी हुन् ।
पुरुष युगल तर्फ एपिएफका दिपेश धामी र बिजित थापामगरको जोडीले दमकका प्रकाश राई र सुदेन राईको जोडीलाई २१ । १३, २१ । १४ ले पराजित गर्दै सेनाका प्रफुल महर्जन र रुकेश महर्जनको जोडी संग सेमिफाईनल भेट पक्का गरे । महर्जन जोडीले बुढासुब्बा ब्याडमिन्टन एकेडेमीका सुजन श्रेष्ठ र प्रनिश सिंह ठकुरीका जोडीलाई २१ । १३, २१ । ११ हार चखाए ।
यसैगरि सेनाका रत्नजित तामाङ्ग र नविन श्रेष्ठको जोडी बुढासुब्बा ब्याडमिन्टन एकेडेमीका सूर्य श्रेष्ठ र रविन साउदेनको जोडीलाई २१ । १४, २१ । १७ ले हराउँदै सेमिमा पुगे । रत्नको जोडीले अव फाईनल प्रवेशका लागि एपिएफका गौतम कठायत र सुनिल जोशीको जोडी संग प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् ।
जिगौतम र सुनिलको जोडीले पुलिसका बिष्णु कटवाल र जीवन आचार्यको जोडीलाई १३ । २१, २१ । १८, २२ । २० ले पराजित गर्दै सेमिफाईनलमा स्थान बनाएका हुन् ।
२०७५ पुष ३०, सोमबार मा प्रकाशित